भाइ किन राेयाे भनी बुझ्नसमेत माेबाइल एप ?
मेरो दुई महिनाको छोरा रोयो, मैले उसलाई काखमा लिएपछि रुन छोड्यो । नजिकै बसेकी उसकी ७ वर्षकी दिदीले भनी बाबा बाबुले त् रुन pause गर्‍यो । मलाई उसले प्रयोग गरेको शब्दले एकछिन सोच्न बाध्य पार्‍यो । मनमनै भनेँ, डिजिटल युगका केटाकेटीको भाषा पनि डिजिटल नै हुनथाल्यो । कहिलेकाहिँ भाइ रोयो भने उ मोबाइल एप प्रयोग गरेर किन रोयो पत्ता लगाउछे, भोक लागेर रोएको हो कि, निन्द्रा लागेर हो कि, पिसाब गरेकोले चिसो भएर हो वा अन्य कुनै कारणले हो त्यसै अनुसारको रुवाइको आवाजको अल्गोरिदमसहितको एप हुनुपर्छ त्यो । उसले भाइ रोएको आवाज मोबाइलको एपमा भएको आवाजसित दाजेर जवाफ भेट्टाएर सुनाउछे । यो आर्टिफिसल इण्टलिजेन्सको प्रयोगको एउटा सामान्य उदाहरण हो ।
हाम्रा दर्शन, साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिमा प्रकृति विज्ञान र प्रविधिका ज्ञानले कसरी प्रभाव पार्दै आएको छ र आज हाम्रो सोच्ने, धारणा विकास गर्ने सवालमा कसरी यसको प्रयोग हुँदै जान सक्छ भन्नेबारे यो लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विज्ञान प्रविधिको ऐतिहासिक विकासको शृंखला र हाम्रा धार्मिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक विचारको विकास श्रृंखला बीचका सम्बन्धलाई केलाउने हो भने कतिपय अवाथामा ती परस्परविरोधी र कतिपय अवस्थामा सहजतापूर्ण रहेको पाइन्छ । विज्ञानिक ग्यालिलियोले पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ भन्दा चर्चको मान्यताविपरीत भएको भनेर उनलाई जेल हालियो । धार्मिक मान्छेबाट ग्यालिलियो मात्र होइन थुप्रै विज्ञानिक मारिए, सताइए ।
स्टालिनको पालामा रुसमा शासकबाट विज्ञानिकमाथि निकै ठूलो दबाब दिइन्थ्यो भनिन्छ । चार्ल्स डार्विनले जीवको उत्पत्ति (origin of species)बारेको सिद्धान्त दिँदा प्राणीहरूको सृष्टि कर्ता भगवानको अस्तित्वमा प्रश्न उठेकोमा उनको व्यापक आलोचना भयो । मानव सव्यताको विकासक्रमको ऐतिहासिक भौतिकवादबादी विचार भनेर मार्क्स एङ्गेल्सले राजनीतिक प्रणालीमा भगवानको अस्तित्वको कुरा जोड्नु बेकार भने त्यसो भन्नुमा उनीहरूलाई डार्विनको रचनाले पनि सहयोग गरेको देखिन्छ । यी सामाजिक मूल्य मान्यता र आयामलाई नै बदल्ने किसिमका वैज्ञानिक धारणा थिए ।
समय क्रम सगै वैज्ञानिक भनिएका धारणाहरू पनि बदलिदै जाने र असान्दर्भिक हुन्छन भन्ने कुरा पनि विज्ञानले नै स्थापित गराएको छ । अल्बर्ट आइन्सटाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्तले हामीलाई सत्य पनि सापेक्षिक हुन्छ र त्यो फेरिन्छ भन्ने ज्ञान दिन्छ । उदाहरणको लागि कुनै वस्तुको गति हामीले देख्ने अनुभूत गर्ने सीमासम्म हुदा न्युटनको नियम अनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ तर त्यही वस्तु झन्डै प्रकाशको गतिसित तुलना हुने गरि तीब्र गतिमा छ भने न्युटनको नियमबाट गरिने व्याख्या मिल्दैन । अब न्युटनको नियमले काम गर्न छाड्छ अर्को नियम आइन्स्टाइनको 'थ्योरी अफ रिलेटिभिटि' बाट त्यसको सहि व्याख्या हुन्छ । यहा नेर फरक फरक परिवेशमा फरक फरक नियमले काम गर्छ भन्ने संदेश देखिछ । साथै सत्य एउटा मात्रै हुँदैन धेरै पनि हुन सक्छ बरु यो त परिवेश अर्थात समय आयाम अनुसार फेरिने रहेछ भन्न सकिन्छ ।
सत्य एउटै हुन्छ भन्ने भनाइ पनि अपूर्ण देखिन्छ । बहुसत्य पनि हुन सक्छ,परिवेश वदलिदा सत्य पनि बदलिन्छ र यो सापेक्षिक हो भनेर बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ । आइन्स्टाइनले भनेका छन् ,माछालाई रुख चढ़ भन्यो भने त्यसले आफ्नो पूरै जीवनभर पनि असम्भव हुने 'मुर्ख ' कुरा ठान्छ । तर माछा बाहेक अन्य कतिपय जीवले त रुख सजिलै चढछन । कुन, सन्दर्भमा के लागू हुन सम्भव छ र के असम्भव छ भन्ने कुरालाई यसले संकेत गर्छ ।
यहा हामीलाई न्युटनको नियमले काम नगर्दैमा त्यो गलत छ भन्ने छुट पनि छैन । त्यसलाई त बरु यो परिवेशमा लागू हुन्छ र यसको सीमा यो हो भन्नु पर्ने हुन्छ । भौतिकशास्त्री निल बोरको 'करेस्पनडेन्स थ्योरी' अनुसार भौतिकशास्त्रमा स्थापित पछिल्ला सिद्दन्तहरू खास खास परिवेशमा पुराना सिद्धान्तमै आउछन भन्ने छ । यो सिद्धान्त निकै रोचक पनि छ,यसलाई समाज विज्ञानमा स्थापित सिद्धान्तहरूलाइ पनि दाजेर हेर्ने हो भने परिमार्जन हुँदै थप व्याख्या भएका नयाँ सिद्धान्तहरू खास खास पुरानै परिवेशको अवस्थामा पुरानै सिद्धान्तसित मेल खान पुग्छन । यसकारण हाम्रो ज्ञान थपिदै गएको छ दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ जसले गर्दा हिजोका ज्ञान ( सिद्धान्तहरू !) आज अपूर्ण देखिएका छन् तिनीहरूले काम नगर्न सक्छन ।
हिजोको ज्ञानले आज काम गर्दैन भने त्यसलाई हामी गलत देख्छौ । त्यसलाई गलत नभनेर हिजोको सत्य भन्दा उपयुक्त होला ! यसको अर्थ सत्य फेरिदै जान्छ भन्ने निष्कर्ष आउछ । यदि हामी उन्नाइसौ शताब्दीको औधोगिक परिवेश फेरी सृजना गर्छौ भने मार्क्सले भने जस्तो औधोगिक पुजीपति वर्ग र मजदुर वर्ग बीचमा वर्ग संघर्ष चल्न सक्छ र मार्क्सवादले काम गर्न सक्छ ! तर आज मार्क्सवादले किन काम गर्दैन भने उनले व्याख्या गरे जस्तो सामाजिक परिवेश छैन त्यसको सट्टा भूमण्डलीकरण र चौथो औधोगिक क्रान्तिको युग छ अर्थात मार्क्सवाद लागू हुन् चाहिने परिवेश छैन ।
एउटै समयमा हजुरबुवाले देखेको सत्य र नातीले देखेको सत्य फरक फरक हुन सक्ने पनि रहेछ, हामी देखिरहेका छौँ । हजुरबुवाले आफु बसेको अर्थात बुझेको, आधार मानेर हेरेको परिवेशबाट देखिने सत्य र नातिले आफुलाई उभ्याएको परिवेशबाट देखिने सत्य त फरक पर्ने भैहाल्यो । हजुरबुवाले देखेको सत्य र नातिले देखेको सत्य एउटै खोज्ने हो भने उनीहरूलाई एउटै अवस्थिति अर्थात परिवेश (same coordinate) मा ल्याउन जरुरी हुन्छ । गणितको भाषामा यसलाई 'कोर्डिनेट ट्रान्स्फम' भनिन्छ । त्यसकारण एउटै वस्तुलाई फरक फरक अवस्थितिबाट नियाल्दा फरक फरक सत्य भेटिञ्छ ।
मानिसको सोच्ने, धारणा बनाउने एक खालको प्रवृत्ति (tendency) हुन्छ, त्यसकै आधारमा उसले निर्णय गर्ने गर्छ । मानवीय स्वभाव लाखौ बर्ष देखिको अभ्यास संगसगै बिकसित भएको अनुबंश अर्थात जिनको अवस्थाले धेरै हदसम्म निर्धारण गरेको छ भनिन्छ । थर्मोडाइनामिक्सको दोस्रो सिद्धान्त अनुसार प्रकृतिमा भद्रगोल बढ्दै गैरहेको छ । प्रकृतिका कैयौ कुरामा भद्रगोल हुने प्रवित्ति रहन्छ, मान्छेको हकमा पनि अराजक बन्ने प्रवित्ति हावी रहन्छ । चालिस पचास हजार बर्षको अवधिमा मानवीय स्वभावमा व्यापक फरक ल्याउने गरि जिनमा बदलाव आउदैन भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सामाजिक नियम मुल्य मान्यताका कारण मात्र उसले आफुलाई स्थापित प्रणालीभित्र हिडाउन प्रयत्न गरेको हुन्छ तर उसको जिन नै अराजकता पछ्याउने गरी विकास भएको छ ।
करिब १० हजार वर्षको सभ्यताक्रममा अभ्यस्त भएको र नगन्य परिमार्जन भएको जिनको तुलनामा लाखौ बर्ष जंगली र अराजक जीवन बाचेको अवधिमा मानव पुर्खामा विकसित जिनको प्रभाव पक्कै पनि बढी छ । त्यसकारण मानिस स्वभावैले अराजक प्राणी हो उसमा सामाजिक नियमहरूले एउटा हदसम्म हिँडाउन सक्छ तर पूर्ण रुपमा राम राज्य वा साम्यवादमा भनिएको जस्तो आदर्श समाजमा पुर्याउन सकिदैन भन्ने तथ्यहरू विज्ञानका नियमहरूले देखाउछन । जीव विज्ञान र समाज विज्ञानका अध्यता वैज्ञानिक एडवार्ड विल्सनले कमिलाको जिनको अध्ययन गरेपछि साम्यवाद त कमिलामा पो लागू हुने रहेछ मान्छेमा होइन भनेका छन् । मान्छेको जिन बराबर बाडेर खाने, समानता स्थापित गर्ने खालको छैन यो अराजकता रुचाउने खालको छ भने कुन हदसम्म उसलाई सामाजिक परिवेश र नियम स्वीकार्य छ त्योसम्म अभ्यास गर्न सकिन्छ,समाजवादसम्म सम्भव होला साम्यवाद मान्छेले स्वीकार्दैन ।
सामान्यतया प्रकृति विज्ञानको सन्दर्भमा समस्यालाई गणितीय समिकरणमा लगिन्छ र त्यो समिकरणको हल गरिन्छ । जस्तै डिफ़रेन्सियल क्यालकुलसमा (differential calculus) कतिपय समिकरणमा धेरै चलहरू (variables) हुन्छन त्यस्तो अवस्थामा पहिले सबै चलहरू रहदा पनि सहि हुनेगरी हल खोजिन्छ त्यसलाई सामान्य हल (General solution ) भनिन्छ । त्यसपछि निश्चित चलहरूको हकमा निश्चित हल (particular solution) खोजिन्छ । यदि हामीले हाम्रा सामाजिक समस्याहरू वर्गीय ,जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि सबैको हल खोज्ने हो भने पहिले सबैलाई मान्य हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्‍यो ! सायद हामीले भन्ने गरेको 'समावेशिता' त्यहि सामान्य हल हो । त्यसपछि बल्ल कुनै जातिको वा क्षेत्रको समस्यालाई विशिष्ट समस्या मानेर थप व्याख्या सहित निश्चित हल खोज्नु पर्‍यो । हामीले यदि सामाजिक समस्यालाई गणितीय समस्या हल गर्ने विधिहरूसित दाजेर हल खोज्यौ भने त्यो वैज्ञानिक र दिगो हुन् सक्छ ।
खासमा पछिल्ला दशकहरूमा तीब्र रुपमा विकास हुँदै गरेको प्रविधिकै कारण विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ आकार लिदै छ,सामाजिक आयाम बदलिदै छ । समाज विज्ञानको चलायमान क्षेत्र अर्थशास्त्रको अध्ययनमा त गणितीय विधि झनै महत्वपूर्ण देखिन्छ । आर्थिक प्रक्षेपण र बदलिदो परिवेशमा विश्लेषण गर्दा बिभिन्न प्रोग्रामहरूको सहायताले मोडलिङ्ग गरेर निस्कर्ष निकाल्न थालिसकिएको छ । उदाहरणको लागि अहिलेको संरचनाभित्रको आर्थिक गतिविधिका तथ्यांकहरू विश्लेषण गरेर हाम्रो जस्तो समाजमा आम्दानीको वितरण कस्तो प्रकृतिको छ त्यो ग्राफमा देख्न सकिन्छ । अब हामीले गरिबी र असमानता हटाउन आम्दानीको वितरणलाई न्यायोचित बनाउने हो भने लक्षित परिणाम प्राप्त गर्न संरचना र नीति बदल्न सकिन्छ र त्यसै अनुसारको 'मोडल' विकास गर्न जरुरी हुन्छ । । सामान्यतया मानिसहरूको सम्पति र आम्दानीको वितरणलाई हेर्‍यो भने भौतिक विज्ञानमा भन्ने गरिएको 'ग्यासको गति सिद्धान्त' अनुसार ग्यासका कणहरूको ऊर्जा वितरणसित मेल खान्छ ।
अर्थशास्त्र र भौतिकशास्त्रलाई मिलाएर यस्ता विषयहरू व्याख्या गर्न 'इकोनोफिजिक्स' भन्ने विधा नै विकास भैसकेको छ । केही दशकयता प्रकृतिको दोहन र पर्यावरण विनाशविरुद्ध चर्का आवाजहरू उठिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण पेट्रोलियममा निर्भर ऊर्जा र अर्थतन्त्र अनि हाम्रा विकासका मोडलहरू नै हुन् भन्ने कुरामा शंका छैन । विश्व तापमान नै वृद्धि गर्नेगरी धुवा फाल्ने पेट्रोलियम तेलको विकल्पमा 'सफा ऊर्जा' अनि उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामाग्रीहरूबाट निस्कने अत्याधिक फोहोर जुन वातावरणमा मिसिएर समस्या सृजना भएको छ त्यसको विकल्पमा 'पुनर्प्रयोग गर्न सकिने पदार्थहरू' अबको अर्थतन्त्र वृत्तमा हिडने अर्थतन्त्र अर्थात 'सर्कुलर इकोनोमी' खडा गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणाहरू आइरहेका छन् । अब सर्कुलर इकोनोमीमा जाने हो भने हाम्रा नीतिहरूमा गरिबी र असमानताका समस्या पनि हल हुने गरी सफा ऊर्जा र नयाँ पुनर्प्रयोग गर्न सकिने सामग्री सित जोडिने 'प्राविधिक क्षेत्र ' भित्रका अवसरहरू न्यायोचित किसिमले सृजना हुनु पर्छ ।
हामी अझै पनि दर्शन, साहित्यमा वैज्ञानिक सोच नोजोडिकन व्याख्या गर्छौ । युवल हरारीका अनुसार बायोटेक्नोलोजी र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मिलाउदा मान्छेको दिमाग नै 'ह्याक' हुने चरणमा समाज प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा समाज विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने मानवशास्त्री, अर्थशास्त्री, कलाकार, नीति, कानुन निर्माताहरूले झनै धेरै बुझ्न र प्रविधिले निम्त्याउन सक्ने राम्रा र नराम्रा परिणामका असर सामाजिक परिवेशमा कसरी सन्तुलित बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन् जरुरी रहेको छ । प्रविधिले मानिसलाई नियन्त्रण गर्ने कि मानिसको नियन्त्रणमा प्रविधि रहने भन्ने विषय नै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । मान्छे आफैले आफ्नोबारेमा जानेको भन्दा धेरै मेसिनले जान्न थालेपछि स्वाभाविक रुपमा हामी प्रविधिको प्रभुत्वको शिकार हुँदै छौ भने हाम्रा विचार, मूल्य, मान्यता, सस्कृती ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । मान्छे आफैमा यान्त्रिक बन्दै जाने खतरा बढेको छ ।
विज्ञान प्रविधिको विकास मानव जीवनलाई नै सहज र सुविधायुक्त बनाउनकै निम्ति भएको छ ,यधपी विज्ञानका दुस्परिणाम पनि सगसगै आएका हुन्छन । कतिपयले विज्ञानलाई बिनासको पर्याय भनेर भ्याख्या गरेको पनि पाइन्छ । कवि बालकृष्ण समको कविताको अंस 'रोइ विज्ञान मर्दछ' भन्ने कुरालाई बारम्बार चर्चा गरिन्छ । ज्ञान हासेर मर्ने विज्ञान रोएर मर्ने भन्ने प्रसंग कवि समले कसरी व्याख्या गरे थाहा भएन तर यसलाई आधार बनाएर विज्ञानको अवमुल्यन गर्नु चाहि उचित हुँदैन ।
हामीलाई तर्क गर्न र सम्भावित विकल्पहरूमध्ये उपयुक्त विकल्प छनोट गरी विवेकपूर्ण निर्णय (rational decision) लिन समेत सम्भव हुँदै गएको छ । राजनीतिमा, अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा, व्यवसायको विश्लेषण र निर्णय लिने सवालमा गेम थ्योरी, आर्टिफ़िसल इण्टलिजन्स निकै उपयोगी देखिएका छन् । उपलब्धिमूलक परिणाम निकाल्न उपलब्ध विकल्प र सीमाभित्र रहेर के के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गेम थ्योरीको प्रयोग हुन्छ । राजनीतिक चालवाजीमा त यो झनै रोचक र उपयोगी हुन्छ भनिन्छ ।
वास्तवमै हाम्रा साहित्य रचनाहरूमा बोलिने लेखिने भाषा शब्दहरू वैज्ञानिक तथ्य र प्राविधिक कोणबाट पनि सहि हुने हो भने कति मज्जा आउछ । कवि भूपी शेरचनको जीवनको अध्यारो सडकमा भन्ने कविताको अंस साच्चै गज्जब छ । 'जीवनको अध्यारो सडकमा सफलता, साइकलको डाइनामोबाट बल्ने बत्ति झैँ लाग्छ, जबसम्म पेडलमाथि मेरो खुट्टा चलिरहन्छ,बत्ति बलिरहन्छ जब म थाक्छु र मेरो खुट्टा रुक्छ,अन्धकार मेरो अगाडी आएर भुक्छ' ! सफलता के हो लामो व्याख्या नै नचाहिने यो कविता प्रविधिको भाषा सित दाजिएको छ,हाम्रो सफलता हाम्रो कर्मको निरन्तरतामा मात्र हुन्छ भन्ने संदेशसहित !
समाजको आयाम फेरिदै जादा सामाजिक मान्यताहरू पनि अवश्य नै परिमार्जन हुँदै जाने छन् । हामी कुनै सिद्धान्त वा वादमा सिमित हुन सकिन्न । प्रविधिलाई पछ्याउदै समाजको गतिशिलता सित हामीले आफुलाई रुपान्तरण गर्नु पर्ने चुनौती हाम्रो अगाडी देखिएकोले प्राविधिक र अप्राविधिक क्षेत्रका हामी सबै वैज्ञानिक सोचको विकासमा प्रयत्नशील हुँदै जानु पर्ने समयमा हामी छौ !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ७, २०७७, ०९:०२:००